Vernee V2 Pro ဖုန်း (6GB RAM၊ 64GB ROM, 5.99 လက်မ) စျေးနှုန်းမှ ...
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်ဖုန်းများVerney V2 Pro ကိုဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.99 လက်မ)
Verney V2 Pro ကိုဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.99 လက်မ)
Vernee V2 Pro 4G Phablet ၏စျေးနှုန်းသမိုင်း
€ 258,12 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
€ 265,83 - 2019 12 အောက်တိုဘာ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 265,83 - 2019 12 အောက်တိုဘာ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 258,12 - 2019 12 နိုဝင်ဘာလ
Vernee V2 Pro ကို 4G Phablet ကို
Vernee V2 Pro ကို IP68 4G စမတ်ဖုန်း 6200mAh
Verney V2 Pro ကိုကို Global တေးဂီတအဖွဲ့လက်မ FHD 5.99 8.1 + Android ကို IP68 6GB 64GB RAM ကို ROM ကို MT6763 4G စမတ်ဖုန်း
Verneys V2 Pro ကို 4G phablet 5.99 8.1 MTK6763 လက်မအန်းဒရွိုက် (Helio P23) Octa Core 2GHz 6GB RAM ကို ROM ကို 64GB 21.0MP + 5.0MP နောက်ကင်မရာလက်ဗွေအသိအမှတ်ပြု 6200mAh Built-in
●မြင်ကွင်း: 5.99 လက်မ, 2160 1080 pixels ကိုမျက်နှာပြင် x
● CPU ကို: MTK6763 (Helio P23) Octa Core 2GHz
● System ကို: အန်းဒရွိုက် 8.1
●ကင်မရာ: 21.0MP 5.0MP နောက်ဘက်ကင်မရာ + + 13.0MP 5.0MP dual-မျက်နှာစာကင်မရာ
●အာရုံခံ:, G-sensor ကိုထိန်းချုပ်မှု, အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာ, အလင်းအာရုံခံကိရိယာ, အီလက်ထရောနစ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်, ဂိုင်ရိုစကုပ်, Geomagnetism NFC ကို, OTG, လက်ဗွေရာအသိအမှတ်ပြုမှု
● SIM ကိုကတ်: dual-Nano SIM ကို dual-standby +
● Feature ကို: ဂျီပီအက်စ်, AGPS, GLONASS, BDS
●ဘလူးတုသ်: 4.2Network မှ:
● 2G: ဂျီအက်စ်အမ် B2, 3, 5, 8
● 3G: B1 WCDMA /2/4/5/ 8, TD-SCDMA: B34 / 39
● 4G: FDD-LTE ကို: B1 /2/3/4/5/7/ 8 / 12 / 17 / 19 / 20, BC0 / BC1, TDD-LTE ကို: B34 / 38 / 39 / 40 / 41
OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.1
Service Provider: သော့ဖွင့်
SIM card slot: dual-SIM, Dual-ကို standby
SIM ကဒ်ကဒ်အမျိုးအစား: Dual-Nano SIM ကို
အမျိုးအစား: 4G phablet
CPU ကို: MTK6763
ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်: 128GB မှတက် TF ကဒ် (မပါ)
2G: ဂျီအက်စ်အမ် 1800MHz, ဂျီအက်စ်အမ် 1900MHz, ဂျီအက်စ်အမ် 850MHz, ဂျီအက်စ်အမ် 900MHz
Network မှအမျိုးအစား: LTE ကို FDD-ဂျီအက်စ်အမ်, TD-SCDMA, TDD-LTE ကို, WCDMA
WIFI: 802.11a /b/ g / n ကြိုးမဲ့အင်တာနက်
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု: 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi 3G, 4G, 4.0 ဘလူးတုသ်, CDMA, Dual-Band, Wi-Fi, GPS ဂျီအက်စ်အမ်, NFC Wi-Fi
စီဒီအမ်အေ: CDMA BC0 / BC1
/ TD-LTE ကို TDD: TDD-LTE ကို: B34 / 38 / B39 / B40 / B41 (2545 - 2655MHz)
4G LTE ကို: FDD B1 2100MHz, B12 700MHz FDD, TDD B17 700MHz, B2 1900MHz FDD, TDD B20 800MHz, B3 1800MHz FDD, TDD B4 1700MHz, B5 850MHz FDD, TDD B7 2600MHz, B8 900MHz FDD, TDD B19 800MHz
screen resolution: 2160 x ကို 1080
screen size: 5.99 လက်မ
screen အမျိုးအစား: က IPS
နောက်ကျောကင်မရာ: 16.0MP, 5.0MP
ကင်မရာ Functions များ: မျက်နှာအလှအပ, face detection, မြင်ကွင်းကျယ် Shot
ကင်မရာအမျိုးအစား: Quad ကင်မရာများ
ရှေ့ကင်မရာ: 8.0MP + 5.0MP
video recording: ပံ့ပိုးမှု 1080P ဗီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်
က MS Office ကို format နဲ့: Excel, PPT, သမ်မာကမျြး
ဂီတပုံစံ: AAC, AMR, M4A, MP3, WAV
ရုပ်ပုံပုံစံ:, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
ဗီဒီယိုကို format နဲ့: H.264, MPEG4
အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ: 3G, 4G, နှိုးစက်, Bluetooth Browser ကို, Calculator ကို, ပြက္ခဒိန်, ကင်မရာ, E-စာအုပ်, လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြု, လက်ဗွေ Unlocking, FM ရေ, GPS ဆွဲငင်အား sensing, ဆွဲငင်အား Sensing စနစ် MP3, MP4, NFC သတိပေးချက်, OTG, Proximity Sensing, အသံ Recorder ကိုရေစိုခံ, Wi-Fi
FM ရေဒီယို: ဟုတ်ကဲ့
Google က Play Store အား: ဟုတ်ကဲ့
I / O Interface:2Nano SIM ကိုပေါက်, 3.5mm ပေး Audio ထဲကဆိပ်ကမ်း, Micophone, နာယက, Type-C x
IP ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: IP68
sensor: Accelerometer, Ambient light sensor, E-Compass, ဆွဲငင်အား sensor, ဂိုင်ရိုစကုပ်, Proximity sensor
အသံ Recorder: ဟုတ်ကဲ့
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် (mAh ဘက်ထရီ): 6200mAh
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: Li-ion ဘက်ထရီ
USB က Cable ကို: 1
package အရွယ်အစား: 19.60 x ကို 19.60 x ကို 2.80 စင်တီမီတာ / 7.72 x ကို 7.72 x ကို 1.1 လက်မ
package အလေးချိန်: 0.5300 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 16.42 x ကို 7.94 x ကို 1.21 စင်တီမီတာ / 6.46 x ကို 3.13 x ကို 0.48 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 0.2590 ကီလိုဂရမ်
Verney V2 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: ဒါဟာအကောင်းဆုံးမျးခံစမတ်ဖုန်း Is ???
Verney V2 Pro ကို: က Galaxy S9 Active ကို Clone ဘယ်လိုကောင်းပါသလား? လက်ကမ်း Preview ကို
တရားဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း Verney V2 Pro ကို | | အင်္ဂါရပ်များစတိုင်မျးခံဖုန်းရှင်းလင်းချက်
wow! СамыйМодный IP68 СмартфонРеальноУдивил
Verney V2 Pro ကိုဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.99 လက်မ) ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ9ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Verney V2 Pro ကိုဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.99 လက်မ)
ရီကာဒို - 2019 10 ဇွန်
1.- လင်းမ်သည် 1.21 စင်တီမီတာသတ္တု frame.2.- နှစ်ချက် 13.3mp ကင်မရာရှေ့နှင့်နောက်ကျော 21 mp3.- တစ်ဦးကအလွန်မြန်နှုန်းငါ antivirus4.- RAM5.- ရီးရဲလ် IP6 ၏ Memory68.- တစ်ဦးကအများကြီး၏တစ်ဦးကအများကြီး install လုပ်ပြီးနောက်မြန်နှုန်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် sensors.Etcétera၏ shockproof.7.- လောတဟာနိုင်ငံတကာဆုချီးမြှင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဆယ်လူလာဖြစ်ပြီးထိုက်ဖြစ်ပါသည်, အလုပျလုပျဖို့ဆယ်လူလာ၏အမြစ်အတွက်စဉ်းစားအတူဖန်ဆင်း! နှင့်သင်တန်း၏အဘယ်ကြောင့်ဖက်ရှင်မဟုတ် !!! အကြမ်းခံများနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသော phablet လက်ခဏာနှငျ့အတူ။ ဒါကြောင့်အကြံပြုပါသည်။ တချို့ကမိုးသည်းထန်စွာ။ သို့သော်ကြမ်းတမ်းဖုန်းပုံမှန်။
Legrad Gabor - 2019 10 ဇွန်
ဒါဟာ LED သတိပေးချက်တစ်ခုရှိပါတယ်: အအချက်အလက်များတချို့ရှိနေပါတယ်ဒီမှာကတချို့ကျန်တာတွေမသိရသေးဖြစ်နိုင် categories.Because thoose လူမိုက်ကံကောင်း - ငါကတာရှည်တည်တံ့ဘက်ထရီနဲ့ကမ္ဘာကြီးရေကိုခံနိုင်ရည်ဖုန်းကိုဖြစ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ headphone jack တစ်ခုအပိုဆောင်းမှာ USB Type ကို C calbe ရှိပါသည်။ wifi 5G ထောက်ခံပါတယ်။ lanyard ပူးတွဲမရှိရာအရပ်ကိုရှိပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အနည်းဆုံး Edes မှာဖြစ်ပါသည် - ပုံမှန်မာကျောဖန်မျက်နှာပြင်ကာကွယ်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကြော်ငြာ '' ဘက်ထရီ mode ကိုမှတပါး 'ခလုတ်ကို actualy screenshots များဖန်တီးနဲ့ငါပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သည့် setting များကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ဒါဟာထင်းမီး-rate ကိုမော်နီတာရှိပြီး '' ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု '' ခေါ်သည့် built-in app ကိုအတူသုံးနိုင်တယ်။ အဆိုပါလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ blazingly အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမဆက်ကပ်အပ်နှံကင်မရာခလုတ်ကိုရှိပါသည်။ ကင်မရာခလုတ်ကိုအဖြစ်သို့မဟုတ် mode ကို Save the ကြော်ငြာဘက်ထရီအဖြစ် re-map အပိုခလုတ်ကိုမှဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်ကြီးစွာသောပါလိမ့်မယ် - နှင့်ဤဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုအတူပြုလို့မရပါ။
JCPFER - 2019 10 ဇွန်
acquistato dopo un အာရုံကို analisi dei prodotti စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၌တည်၏။ VOLEV yl Massimo နှုန်း la Cifra contenuto SPES အီး cosi E Construction ။ stesso TECNICHE caratteristiche di un ဖုန်းကို di più Marche blasonate che il doppio verrebbe Almen ။6giga သိုးထီး di si မဟုတ်တဲ့ vedono spendendo အနုပညာ di 500 € Normalmente ။ Arriva INSTALLAT တစ်ဦးထုံးစံ၌ con il တစ်ကိုယ်တော်ပြဇာတ် senza inutile app store ကို da poterlo personalizzare Massimo အယ်လ်။ ESTETICA da urlo con sensazione di compattezza paurosa ။ apparenza အတွက် indistruttibile ။ Incredibile batteria con utilizzo နို့အီရတ်တွင်4giorni ။ le နှုန်းကepuò essere usato ပီဆို anche အတိုင်းအတာဖြင့်တရားစွဲဆိုလိုက်သည် mezzo di Difesa ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့လာကြ၏။ ထိုနောက် un colpo အဖြစ် Bosco Fitto မဟုတ်တဲ့ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးက GPS provato 2.000 metri di ခွဲတမ်း။ altro che da mela fighetti
Xiaomi က Redmi5Plus အားဖုန်းမှ (3GB RAM ကို, ROM ကို 32GB, 5.99 လက်မ)
Xiaomi က Mi6ဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.15 လက်မ)
Elephone S8 ဖုန်းမှ (6GB RAM ကို, ROM ကို 64GB,6လက်မ)
Blackview A7 ဘတ်ဂျက်ဖုန်းမှ (1GB RAM ကို, ROM ကို 8GB,5လက်မ)
Xiaomi က Redmi Note 4X ဖုန်းမှ (3GB RAM ကို, ROM ကို 32GB, 5.5 လက်မ)
Xiaomi ကမှတ်ချက် Redmi 8